हामी सबैले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी एउटा राष्ट्र हौं । त्यसैले हामीले एउटा राष्ट्रको जस्तो व्यवहार गर्न पनि जान्नुपर्छ । हामी अहिले संसार नै अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको समयमा छौँ । धेरै कुराहरु बाहिर प्रकट भएका छन् र देख्न सकिन्छ । मन्थन गरौँ, चिन्तन गरौं, फेरि मन्थन गरौँ ।
१. जब चीन कोरोना भाइरसका विरुद्ध लडाईं लडिरहेको थियो, वुहान बन्द गरिएको थियो, चिनियाँ जनता आतंकित थिए, चीन विश्वलाई सहयोग र सद्भावका लागि आह्वान गरिरेहेको थियो । तर त्यतिबेला युरोप र अमेरिका ठट्टा गर्दै थिए । ट्रम्पले पटकपटक चिनियाँ भाइरस भनी व्यंग्य गरे । युरोपका शहरमा चिनियाँ मानिसहरु कुटिए । नेपालमा एउटा पत्रिकाले मजाक गर्दै माओको मुखमा मास्क लगाएको तस्बिर छाप्यो ।
नेपाल सरकारले मानवताका आधारमा सिमाना जोडिएको छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले लेखेँ । स्वयम्सेवक, आफ्नो इच्छाले जान चाहने एउटा चिकित्सकको समूह चीन पठाउनु पर्थ्यो । नेपालले चीनसँगको कुटनीतिमा ठूलो त्रुटी देखायो, त्यतिबेला । चीन गएका नेपाली विद्यार्थीलाई घर आउने अधिकार थियो । तर, सरकारले रेस्कु, इभ्याक्युएसन वा उद्धार जस्ता गलत शब्द प्रयोग गर्‍यो । चिनियाँ जनताप्रति त्यसबेला जुन संवेदना हामीले देखाउनु पर्थ्यो, हामीले देखाएनौं । हामीलाई त्यसले कतै छोएन । तर जब माहामारी पश्चिम पुग्यो, हाम्रा आँखा अचानक खुले ।
२. यो भाइरस रोग थियो । यस्को राष्ट्रियता थिएन । यो मानिसको विरुद्ध थियो राष्ट्रियताको विरुद्ध थिएन । तर यूरोप-अमेरिकन सञ्चारमाध्यमले यसलाई राजनीतिक ठट्टामा बदले । सर्प र चमेरो खाएर त्यस्तो भएको भनेर लेखे । पश्चिमी संस्थाले जनावर मारेको पाप कराएको भनेर लेखे । केही नेपाली सञ्चार माध्यमले पनि यहि कुरा दोहोर्‍याए। अब चीन सकियो भनेर पश्चिमले खुसी देखायो । जब रोगका विरुद्ध लडाइ शुरु गर्‍यो चीनले, अधिनायकवादको कुरा उठाए । कुटिकुटी मानिस थुनेको आरोप लगाए । अर्थात् रोगलाई राजनीतिकरण गरे । त्यसको नक्क्ल गर्ने नेपालमा पनि थिए । पश्चिमी मुलुकले त्यतिबेला चीनलाई यस महामारीका विरुद्ध सहयोग गर्नुपर्ने थियो। रोगमा राजनीति गर्नु हुने थिएन ।
३. अहिले चीनले बदला लिएन । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई राम्रोसँग अगाडि बढाइरहेको छ । उसले अहिले संवेदना र मानवीयताका आधारमा युरोपलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यो । उसले सहयोगका हात अगाडि बढायो । अहिले नेपाली पत्रकार माओका मुखमा टाँसेको मास्कले युरोपेली जनताका मुखमा पस्नबाट भाइरस रोकिरहेका छन् । यस महामारीले विश्वका थुप्रै लुकेका कुराहरुलाई पनि बाहिर ल्याएको छ ।
क. युरोप र अमेरिकामा भएको विज्ञानको विकास मानिसको जीवन बचाउने क्षमता, प्रविधि र औषधिको खोज, अनुसन्धान र निर्माण भन्दा हातहतियार र अन्यथा प्रयोगका कुराहरुमा भएको रहेछ । जुन क्षमता चीन, कोरिया र जापानले कोरोना रोक्न देखाए, जस्ता उपकरणहरु प्रयोग गरे, त्यो युरोप र अमेरिकामा देखिएन । यो भ्रष्ट पुँजीवादी उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रको विशेषता रहेछ ।
ख. पुँजीवाद र समाजवादबीचको फरक प्रष्ट देखिएको छ, अहिले । चीनमा जब यो भाइरसका विरुद्ध लडाई चलिरहेको थियो, सबैलाई सरकारले गर्ने सहयोग उस्तै थियो । गरिबले काम गर्न नपाएर मर्नुपर्ने र धनीले आलिसान महलमा आइसोलेसनमा बस्ने स्थिति देखिएन । तर पुँजीवादी अमेरीकामा धनिका लागि महंगा अस्पताल छन्, सबै सुविधा छन् । तर तल्लो आर्थिक अवस्था भएका जनताको हालत खराब छ । त्यहाँका सञ्चार माध्यमले त्यो कुरा किन बाहिर ल्याउँदैनन् ? किनभने सबै सञ्चार माध्यम कर्पोरेट हाउसका अधिनमा छन् र उनीहरुको स्वार्थ भ्रष्ट पुँजीवादको सेवा गर्नु हो । यता नेपालमा पनि उनको प्रभाव छ । त्यसैले ट्रम्पको मुखमा मास्क लगाएको तस्बिर छाप्दैनन् । महामारीको सामना गर्न पुँजीवाद असफल हुने रहेछ भन्ने कुरा, २० हजार मानिसमा संक्रमण हुँदा ६ हजार मरेका घटनाले पुष्टि गर्छन् । नेपालमा पनि धनीहरुको यो माहामारी रोक्ने सहयोग देखिएन । धनीका अस्पतालमा ज्वरो आएका मानिस छिर्नै नपाउने अवस्था पो आयो ।
ग. पश्चिमी पुँजिवादी अर्थतन्त्रका लागि यो महामारी त्रासदिपूर्ण हुने देखियो । एसिया खासै प्रभावित नहुने पनि देखियो । एसियामा महामारीलाई रोक्न चीनको सहयोगले भूमिका खेल्ने पनि देखियो । तर पश्चिमी प्रभावमा रहेको नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले चीनलाई महामारीका समयमा नेपाल हाम्रो असल मित्र हो भन्ने भाव देखाउन सकेन । यो कुरा सरकार र दलहरुलाई अहिले पनि महसुस भएको जस्तो लाग्दैन । यस्ले नेपालको चीनसँगको कुटनीतिमा धमिरा लागेको आशंका गरिएको छ ।
घ. चीनले अहिले जसरी विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघसँग समन्वय गर्दै सहयोग अगाडि ल्यायो, त्यसबाट कुटनीतिमा उसको परिपक्वता प्रकट भयो । उसको उत्पादन प्रणाली पुनः सञ्चालनमा आयो । उसको अर्थतन्त्रले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अब रहेन । तर विकसित देशको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखियो । चीनले एक अर्थमा छलाङ मार्‍यो भन्दा हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा चीनको भूमिकालाई बर्खास्त गर्न अब सम्भव छैन ।
४. के हुन्छ नेपालमा चीनको सशक्त उदयको यो अवस्था र पश्चिमको यो संकटले ? थुप्रै प्रभाव पर्ने कुरा टड्कारो छ । भारत यदि यस महामारीको प्रकोपमा चीनकै तहमा आयो भने, भारतलाई यो समस्या सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन, पैसा र विज्ञान नभएर होइन । भारतको जनसंख्या सचेत छैन र नेपालमा जस्तै अनुशासनहिन अल्पज्ञानको सिकार भएको छ । यहाँ पनि कालोबजारी र भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ । भारतमा महामारी फैलियो भने, नेपाल तहसनहस हुन्छ । के सहयोग माग्ने हक छ हाम्रो चीनसँग अझै ? सहयोग त चीनले फेरि पनि गर्छ । तर उनीहरु हामीलाई सहयोग दिनु अगाडि एक पटक हाम्रो प्रवृत्ति देखेर मुस्कुराउने छन् । के पश्चिमले हामीलाई चिकित्सक र औषधि ल्याउने छ ? त्यसैले भनेको होला नि, श्रीमती श्रीमान छोड्न सकिन्छ छिमेकी बदल्न सकिन्नँ भनेर । हामीले भूकम्पमा चीनले लगाएको गुण स्मरणसम्म गरेका छौँ ? सरकारमा बस्नेहरुले मुल्यांकन गर्दा राम्रो होला ।
५. यो समस्यालाई सरकारले हेलचेक्राई नगरोस् । तत्काल निम्न कुरा गर्नुगर्नु पर्ने देखिन्छ-
क. चीनसँग सहयोग मागोस् । चिकित्सक, औषधि र प्रविधि तत्काल ल्याओस् । आइसोलेसन गृह निर्माणमा सेनाको प्रयोग गरोस् । बाँचे मात्र पछि प्रगति गरिने हो ।
ख. कालाबजारी रोक्न र महामारीका नाममा देखिएको कालाबजारी र स्थानीय तहमा देख्न थालिएको अपव्यय रोक्न आपतकाल घोषणा गरियोस् ।
ग. सिमाना बन्द गरियोस् र तराईका सबै शहरमा उच्चस्तरीय स्वास्थ समूहहरु पठाइयोस् । तराईका जनतालाई आतंकबाट जोगाइयोस् ।
घ. धनी र ठूला मानिस बेइमान हुन्छन् भन्ने प्रष्ट देखिसकियो । गरिबहरुलाई राशन बाँढ्ने धेरैवटा स्टोरहरु शुरु गरियोस् ।
ङ. गरिबहरु छिर्न पाउने अस्पताल तोकियोस् ।
६. हरेक समस्याले पाठ सिकाउँछन् । हाम्रो संघीयता कति सफल छ भन्ने यसले नै देखाउने छ । सरकारले राम्रोसँग डेलिभेरी गरेन भने, र दलहरुले आफ्नो औचित्यता प्रमाणित गरेनन् भने विद्युतको तालिम केन्द्रमा नेताहरुले पुग्नु पर्ने हुन सक्छ । भित्र र बाहिर दुवैतिर घेराबन्दी भएको देख्नु भएकै होला । निरो रोम जल्दा बाँसुरीमा आफ्नो गीतको लय बनाउदै थिए । अहिले पो थाहा भयो उनी रोम जलोस् भन्ने चाँहदा रहेछन् । उनी त्यहाँ ठूलो महल बनाउन चाहँदा रहेछन् । जति बेला रोम जल्दै थियो, उनले बार्दलीमा उभिएर हेरेछन्, रातमा उज्यालो उनलाई खुब मन परेछ । त्यसपछिजुन अराजकता रोममा जन्मियो, त्यसले रोम नै मासियो । हामीले आँखा खोल्नु आवश्यक छ । भूकम्प पछि मानिसमा अराजकता झन मौलायो । यो महामारीले अराजक पराबलियनहरुको ताँती झन झन बढ्ने छ । अहिलेको मोजमस्ती महङ्गो हुनेछ ।